7 Arrimood oo Sir Ah oo Dhadhan Wanaagsan u Yeela Nolosha Lamaanaha Is-jecel – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA 7 Arrimood oo Sir Ah oo Dhadhan Wanaagsan u Yeela Nolosha Lamaanaha...
7 Arrimood oo Sir Ah oo Dhadhan Wanaagsan u Yeela Nolosha Lamaanaha Is-jecel
Markii waqti la joogaba waxaa habboon in lamaanaha ay soo hindisaan shay cusub si xirirka looga dhigo mid nool oo si wanaagsan u socoda, dhaqamada noocan ah ee marwalba cusbooneysiinta leh xiriirka waxey ka dhigaan mid ifaya xitaa haddii lamaanaha ay sanooyin badan wada joogaan ma kala caajisayaan.
Si hadaba xiriirka looga dhigo mid aad u wanaagsan oo aan laga caajiseyn, waxaan kuusoo gudbineynaa talooyin dhowr ah oo dhadhan cusub u yeelaya xiriirka lamaanaha si ay noloshooda ugu farxaan oo ay reyn reyn u dareemaan, waa sida uu qoray websiteka Woman day ee dalka Mareykanka ka soo baxa.
La qeybso sheekooyinka qosolka leh
La qeybso sheekooyinka qosolka leh ee ka dhaca goobtaada shaqada, caado ahaan sheekooyinkaas oo kale waqti badan ma qaataan laakiin waxey xoojiyaan kalsoonida lamaanaha si ka badan sida aad filayso, isagana sidaada oo kale waa inuu sameeyaa, lamaanahaaga ula dhaqan inuu yahay saaxiibka kuugu wanaagsan ee aad leedahay, haka labo labeyn inaad la qeybsato ilbiriqsiyada qosolka leh waxwalba oo ka dhaca goobtaada shaqada.
Labo jeer ha fakarin marka xaalku uu khuseeyo farxadda Lamaaanahaaga.
Ha labo labeyn marka arrintu ay khusayso farxadda lamaanahaaga, waxaa waajib ah inuu dareenku yahay mid wadaag ah oo dadaalku aanuu hal-dhinac ku koobneyn, maxaa yeelay arrintaasi waxey xoojineysaa xiriirka lamaanahaan.
In lamaanahaaga aad waqti wada qaadataan kalgaceylka ayaa ku kordha xiriirkuna wuu ku adkaadaa.
Inaad waqti wanaagsan la qaadato lamaanahaaga, xitaa haddii ay daqiiqado tahay kadibna aad koob shaaha wada cabtaan idinkoo wada sheekeysanaya, arrintaasi wey isku kiin soo jiidaysaa xiriirkana wey sii adkeynaysaa, xiriirka lamaanahaaga ha ka dhigin darajada laabo, kadib saaxiibada daneyn xoog leh ha siin, si ka badan xiriirka, naftaada iyo noloshooda gaarka ah waqti ku fulan sii waxyaabaha muhiimadda gaarka ah u leh noloshooda khaaska ah.
Lamaanahaagu waa qeyb muhiim ah oo qoyskaaga ka mid ah waxaa habboon inaad ixtiraamto xeerka qoyska.
Waxaa habboon in lamaanahaagu uu qeyb muhiim ah ka noqdo qoyskaaga, ka shaqee isku xirka qoyskaaga , abaabul kulamo qoys ama in dalxiis la wada aado oo waqtiyo farxad leh la wada qaato.
Inaad barato saaxiibada, qaraabada lamaanahaaga waxey ka qeybqaadataa inaad si mug leh u fahamto.
Inaad barato qaraabada, saaxiibada lamaanahaaga oo aad xiriirso oo aad booqashada is dhaafsataan waxey kaa garabsiisaa inaad is fahamtaan dhinaca kale, xaalad wanaagsan oo kalgaceyl lehna wey abuurtaa.
Inaad lamaanahaaga u mahadceliso waxey xoojisaa xiriirka.
Ammaanta iyo mujaamaladu aad u soo jeediso lamaanahaaga, waxey dareensiisaa muhiimadda uu u leeyahay noloshaada, waxa uu dareemaa qadarin inaad u hayso, inaad had iyo jeer isku mahadcelisaan xiriirka ayay xoojisaa, waxeyna ka dhigtaa mid romantic ah.
Labiska cusub xiriirka diiranaan ayuu kusoo kordhiyaa
In la cusbooneysiiyo muuqaalka oo dhar cusub la xirto xiriirka diiranaan ayuu kusoo kordhiyaa, waxeyna muujineysaa daneynta aad lamaanahaaga u hayso, waqti ayaad ku wada qaadan kartaan goobta sportska lagu ciyaaro, si wadajir ah ayaad dhar u soo wada iibsan kartaan, waxaa muhiim ah inaad naftaada ku dadaasho oo aad soo jiidato lamaanahaaga, arrintaas oo iftiin kusii kordhineysa xiriirka.
Previous articleNorway oo Soomaaliya siineysa deyn gaareysa $353 Milyan
Next articleDhismaha Garoonka Kubadda Cagta magaalada Gaalkacyo
Whatsapp Oo Budhcadda Internet Ku U Dhacday Iyo Shirkadda Oo Macaamiisheeda...
Sida Ugu Habboon Ee Aad Maqaarkaaga Uga Ilaalin Karto Dhibaatada Ay...